Ukuthuthwa komphakathi eSingapore
E-Singapore, ucatshangelwe kahle futhi wakha uhlelo lokuthutha umphakathi. Ngokuvamile, uma uhlela uhambo kunoma yiziphi izinto edolobheni, onawo kunamathuba amaningi ongakwenza. Ukuthuthwa komphakathi eSingapore kunikezwe ngamamitha, amabhasi namatekisi. Ngokuhlukile kuyadingeka ukwabela amabhasi nezivakashi.
I-Metro eSingapore iyindlela yokuthutha yesimanje futhi esheshayo, ngenxa yokuthi ungayifinyelela kanjani eminingi yezinto ezweni. I-metro uhlelo liqukethe imigqa engu-4 eyinhloko kanye neyodwa eduze: East West Line (Green Line), North West Line (umugqa obomvu), eNyakatho South Line (umugqa obomvu), Umgqa ophakathi (umugqa ophuzi) nomzila okhanya, futhi yenzelwe ukuletha abagibeli emigqeni emikhulu yedolobha.
Ukuhamba kuhamba kusuka ku-1.5 kuya ku-4 amaRandi angamaRandi. Intengo incike ebangeni ozolishayela ngalo.
Futhi-ke, izivakashi zihlala zinesithakazelo kulo mbuzo, lapho isiteshini sametro eSingapore sisebenza khona. Ngezinsuku zamasonto, ungawasebenzisa kusukela ngo-5.30 kuya phakathi kwamabili, futhi ngezimpelasonto namaholidi - kusukela ngo-6.00 futhi kuze kube phakathi kwamabili.
Uhlelo lwebhasi eSingapore luye lwathuthukiswa kahle. Amashejuli ebhasi angathengwa eziteshini zamabhasi.
Izindleko zamathikithi ebhasi eSingapore zivela ku-0.5 kuya ku-1.1 dollar yaseSingapore. Intengo incike ebangeni kanye nokutholakala kwesimo sezulu ebhasini. Ungakhokha ukuhamba ngebhasi emnyango ngenkokhelo usebenzisa idivayisi ekhethekile noma sebenzisa amakhadi okuhamba e- Tourist Pass noma e- Ez-Link , uma unayo. Uma ubala ukheshi, khumbula ukuthi umshini awukhiphi ushintsho, ngakho-ke kuphakanyiswa ukuba ubeke imali ngemali.
Amabhasi agijima azungeze iSingapore kusukela ngo-5.30 kuze kufike phakathi kwamabili.
Amatekisi aseSingapore nawo abhekwa njengendlela yokuthenga ezithengekayo ezokuthatha kwenye indawo ngenani elifanele kakhulu. Intengo inezindleko zokufika ematekisi (kusuka ku-3 ukuya ku-5 amaRandi angamaRandi, intengo ixhomeke ekilasini lemoto) kanye nokuhamba ngokusho komlingisi wetekisi. Ikhilomitha ngayinye iyokubiza cishe ngamasenti angu-50. Kukhona, nakanjani, nezindleko ezihlukahlukene emalini, isibonelo, ngehora lesonto noma ebusuku noma ukushayela phakathi kwengxenye yedolobha.
I-taxi kulula ukubamba emgwaqeni, futhi ungabiza ngocingo: 6342 5222, 6552 1111, 6363 6888 nabanye. Kodwa-ke, ikholi ekamelweni lokulawula lizokhokhiswa - kusuka ku-2.5 kuya ku-8 amadola aseSingapore - intengo nayo ixhomeke ekilasini lemoto.
Enye indlela enkulu ukuhamba ngesikebhe eMfuleni waseSingapore ngezikebhe. Ubude benkambo enjalo yimizuzu engama-40. Ungakwazi ukujabulela umbono we -chic we-Esplanade Theatre , isondo likaFerris , elibonga kusukela ekubukeni okude kwesithombe seMerlion namanye ama-panorama evula idolobha.
Izikebhe zisuka ezinhlathini eziseBot Ki naseRobertson Key futhi zisuka epaki Merlion kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-10 ntambama. Izindleko ze-cruise zingama-dollar ase-Singapore angu-22, izingane ezingu-12.
E-Singapore kukhona ukubuka okujwayelekile ukubuka amabhasi amabili okudonsela phansi okuzokuyisa ezindaweni eziningi ezithakazelisayo ezweni. Basebenza emigwaqweni ehlukene emithathu. Futhi kukhona amabhasi abavakashi abangavamile-abama-amphibians, abadwebe ngaphansi kwendada. Umzila wabo ugijima eduze kweClakeke Quay , bese ibhasi ihlela emanzini bese ibhukuda emfuleni ihora.
Izindleko zamathikithi ala mabhasi zingama-dollar angu-33 eSingapore, izingane ezingu-22. Zithunyelwa kusuka ku-10.00 kuya ku-18.00 kusukela enkampanini yezitolo Suntec City Tower (5, Temasek Blvd).
Ngakho-ke, ingqalasizinda yezothuthukisiwe ithuthukise ukuhamba kwakho okusheshayo nokunethezeka kusuka kwenye indawo kuya kwesinye futhi ujabulele isikhathi sakho ezweni.
Yini okumele ivela eNepal?
I-Brunei - ezikhangayo
I-cuisine kazwelonke yaseJapane
Maldives - amaSulumane
Amabhishi aseNingizimu Korea
Metro of Singapore
Ikhofi latte - iresiphi
Ukudla okusheshayo - ngenxa yenkathazo
Ukhukhamba - okuhle nokubi
Utamatisi ohlotshisiwe kanye namakhukhamba ebusika - izindlela zokupheka ezingcono kakhulu nezokuqala ezenziwe ekhaya
Umbuso wezingane ezinyangeni ezingu-7
U-Kate Moss ophukile wabonisa iqoqo lezinto zokugqoka zokwakha kwakhe
Idolobha elingcolile kakhulu emhlabeni
Umbhede we-sofa kabili
IJam kusuka kuma-walnuts inhle
Izitsha zoboya zabesifazane
Izingubo zangamafutha kusuka ngoboya obufakelwayo
Ultrasound ngesonto 7 lokukhulelwa
Ukuqothulwa kwesibalo se-2 degree - ukwelashwa